भ्रमणमा भारू सटहीको गाँठो फुक्ला त ? | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण भ्रमणमा भारू सटहीको गाँठो फुक्ला त ?
लेख | दृष्टिकोण 56 views
भ्रमणमा भारू सटहीको गाँठो फुक्ला त ?
भारतले विगत १८ महिनादेखि प्रतिबन्ध लगाएको पुराना ५ सय र हजार दरका नेपालमा भएका नोट साट्नेतर्फ अहिलेसम्म वास्ता गरेको छै्रन । डेढ वर्षसम्म पनि भारू नसाटिँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार नेपालका वित्तीय प्रणालीमा करीब ५ करोड र बाहिर करीब ३ करोड प्रतिबन्धित ५ सय र हजारका नोट रहेको सार्वजनिक हुँदै आएको छ । सटहीका लागि नेपालले पटकपटक अनुरोध गरे पनि भारतले वास्ता गरेको छैन । जब कि भुटानसँग भएको भारू प्रतिव्यक्ति २५ हजारका दरले उहिल्यै साटिसेकको छ । यस्तो पक्षपातपूर्ण व्यवहारप्रति भारतीय समकक्षीसँग प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणको क्रममा राम्रैसँग कुरा राखेर सटहीको गाँठो फुक्ने विश्वास पीडितहरूले गरेका छन् ।
अवैध कमाइ, भ्रष्टाचार, कालो धन र नक्कली नोटको कारोबार तथा आतङ्ककारी गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्दश्यले यस्तो कठोर कदम चालेको भारतले दाबी गरेको छ । भारतमा यसरी ठूला दरका नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाएको पहिलोपटक भने होइन । भारत स्वतन्त्र हुनुपूर्व सन् १९४६ मा १ हजार, ५ हजार र १० हजार दरका नोट प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यस्तै सन् १९७७ मा कर छलीसम्बन्धी अध्ययन गर्न पूर्वन्यायाधीश के एन वाञ्चुको संयोजकत्वमा गठित समितिको सिफारिशमा १ हजार, ५ हजार र १० हजार दरका नोटमा फेरि प्रतिबन्ध लगाइयो । त्यो बेला जनता पार्टीका नेता मोरारजी देसाईं प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । अहिले पनि भाजपाको नेतृत्वको सरकारले नै ५ सय र १ हजार दरका नोटको प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
नोटबन्धीको शुरूशुरूमा भारतका बैङ्कहरूमा पैसा साट्नेहरूको अस्तव्यस्त लामो लाइन, खाद्यान्नको लुटपाट, आत्महत्याको लहर, सत्तारूढ दल भाजपाबाहेकका राजनीतिक दलहरूको प्रतिवाद र विरोध तथा जनआक्रोशको व्यवस्थापन गर्न मोदी सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको भए पनि अहिले सामान्य भएको छ । नेपालमा त्यो स्तरको चहलपहल नभए पनि व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तथा घरभान्सा चलाउने खासगरी सीमावर्ती क्षेत्रका जनतालाई मर्का पर्नु स्वाभाविकै हो । भारतीय सीमा बजारनजीक भएका नेपाली बस्तीहरूमा बसोवास गर्ने जनतामा प्रायशः धेरथोर सबैसँग भारतीय नोट हुनु सामान्य हो । आकस्मिक प्रतिबन्धले सीमित आम्दानी भएका जनतादेखि ठूलो धनराशि लगानी गर्दै आएका व्यापारीहरूलाई यसले सामान्यदेखि गम्भीर असर पारेको छ । सुदूरपश्चिमका अधिकांश जनता भारतमा रोजगारीमा जाने र फर्किंदा सजिलोका लागि पनि ठूला दरका भारू ल्याउने प्रचलन भएको कारणबाट पनि उनीहरूले विदेशमा पसिना बगाएर कमाएको सम्पत्ति माटोमा मिल्ने आशङ्काले विक्षिप्त भएका छन् । भारतमा कार्यरत नेपाली सैनिकले पठाएको रकमसमेत अहिले बेवारिसे बनेको अवस्था छ ।
नेपालबाट अवैध कारोबार गर्ने, नक्कली नोटको बिगबिगीजस्ता आपराधिक कर्मलाई निरुत्साहित र नियमन गर्ने अवसरका रूपमा सटही प्रतिबन्धलाई उपयोग गर्न सहज भए तापनि लामो समयसम्म साट्ने प्रबन्ध नगरिनु दुःखद नै मान्नुपर्छ ।
राष्ट्र बैङ्कले भारतीय रिजर्भ बैङ्क तथा भारत सरकारसँंग भारू २५ हजारसम्म साट्न अनुमतिका लागि अनुरोध गरेको जानकारी सार्वजनिक गरेको भए पनि अहिलेसम्म खासै उपलब्धि भएको पाइँदैन । भारतले जहिले पनि नेपाली बाटो भएर नक्कली भारू नोटको कारोबार भएको गुनासो गर्दै आएको अवस्थामा सहज रूपमा नोट साट्ने सुविधा देला भन्न सकिन्न ।
विगत लामो समयदेखि सीमावर्ती क्षेत्रका जनता आफ्नो दैनिक कारोबार र व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा भारतीय रुपया सहज रूपमा चलनचल्तीमा आएको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ । करीब ५६ वर्षअगाडिसम्म भारूको कारोबार नेरूजस्तै कुनै व्यवधान र रोकतोकविनै सरकारले राजस्व, मालपोत, भन्सारलगायत आम्दानी भारतीय मुद्रामा नै सङ्कलन गथ्र्यो । राष्ट्र बैङ्कले २०१७ साल वैशाख १ गतेबाट मात्र सरकारी कारोबारमा भारतीय मुद्रालाई बन्देज लगाए तापनि निजी रूपमा यसको कारोबार यथावत् रहेको पाइन्छ । अन्य देशको मुद्राको तुलनामा नेपाली मुद्राको भारतीय मुद्रासँग प्रायः स्थिर विनिमय दर रहने भएकाले जनताले आआफ्नो सुविधाका लागि भारू रकम सञ्चय गर्ने प्रवृत्ति रहनु स्वाभाविक हो । हाल पनि विगत २४ वर्षदेखि भारतीय मुद्रासँगको विनिमय दर स्थिर रहेको छ ।
भारतीय मुद्रासँग सामीप्य बढ्नुका विभिन्न कारण छन् । नेपालीहरूको रोजगार र व्यापारको ठूलो बजार भारत नै भएकाले अहिलेको भारतको कदमले ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ भने कुनै न कुनै रूपमा आमनेपालीलाई परेको छ । भारू नोटको यस सटही हङ्गामाले गर्दा व्यक्तिको मात्र नभएर राष्ट्रको अर्थ व्यवस्थामा समेत चोट पुग्न गएको छ । भारतका जनताले मात्र यसको कष्ट खेप्नु परेको छैन, नेपालमा पनि यस घटनाले सीमाक्षेत्रमा बसोवास गर्ने र व्यापार व्यवसाय गर्ने जनसमुदायलाई व्यापक असर पार्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । नेपाल–भारतबीचको खुला सिमाना, नेपालको अधिकांश व्यापार या त भारतसँग वा भारतीय भूमिको बाटोबाट तेस्रो देशसँग हुने भएकाले पनि यसको नकारात्मक असर नेपाली व्यवसायीलाई नै पर्नु स्वाभाविकै हो । ओलीको यसपटकको भारत भ्रमणमा भारू सटहीको गाँठो फुक्ने आशा र भरोसा पीडितहरूले गरेका छन् ।